BGR - - Tele RELAY တစ်ခုကျွန်မအမေဇုံအပေါ်ရတယ်ဒါကအော်တိုအိုး stirrer ကြိုးမဲ့ဂိမ်း changer ဖြစ်ပါသည်
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ "ကျွန်မအမေဇုံအပေါ်ရတယ်ဒါကအော်တိုအိုး stirrer ကြိုးမဲ့ဂိမ်း changer ဖြစ်ပါသည် - BGR
သငျသညျအကြှနျုပျကိုနဲ့တူနေနှင့်သင်စက်ရုပ်အသက်ရှည်သမျှနှောငျ့အယှကိုင်တွယ်လိမ့်မည်သည့်အခါထိုနေ့၏အိပ်မက်မက်ပါကသင်သည်လုံးဝသွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည် StirMATE စမတ် Pot Stirrer ။ စက်ရုပ်လေဟာနယ်စိတ်ကူးရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ညစာပြင်ဆင်ထားရန်အချိန်ကြွလာသောအခါသူတို့သည်သင့်မကူညီနိုင်ပါ။ ဒီနည်းနည်း gadget ကလာနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဒါဟာအသံတိတ်, ကြိုးမဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ညှိပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်နောက်အကြီးအစက်ရုပ်ဝတ်စုံရှာဖွေတာနဲ့တူ သာ. အရေးကြီးသောအရာများကို ... စိုးရိမ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်စဉ်ဆက်မပြတ်သင်၏အအိုးမွှေ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကို!
အခမဲ့, ကိုယ်လက်လှုပ်။ လိုချင်သော creamy ကိုက်ညီမှုများနှင့်ကိုက်ညီမှုရဖို့ဟင်းချို, စွပ်ပြုတ်, risotto, ငရုတ်သီး, polenta, ဝက်အူချောင်း, သကြားလုံး, caramel ကြက်သွန်နီ, ဒိန်ခဲထောပတ်နှင့်ပိုပြီးရောမွှေပါ။ ကော်ဖီစေ့နှင့်အခွံမာသီးစုံလကင်။
6 ကနေအချင်းများနှင့် 12 အတွက်3လက်မမှနက်ရှိုင်းသော9လက်မမှအိုး၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးမှ Auto-adjust ။
အဆိုပါတိတ်ဆိတ် HIGH torque မော်တာတာဝန်ခံတစ်ဦးလျှင်နာရီ 13 မှတက်လှုံ့ဆော်ပေး။ တစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲအားသွင်း။
ရရှိနိုင်ပါတွဲဖက်ပစ္စည်းများ - (6 ဂါလန်အထိ) သာမိုမီတာနဲ့ stirrer set အလွန်မြင့်မားစွမ်းရည်။ (သီးခြားစီရောင်း)
လှုံ့ဆော်မှု PATTENTED ညင်ညင်သာသာအိုးအောက်ခြေလှည်းနှင့်အစားအစာအပူလောင်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ရာရှောင်ရှားရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
Web ကို။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သငျသညျကို Google ဝိုင်ဖိုင်ရှိပါကသင်သည်မီဒီယာမပြုဘဲ, ဤတောက်ပ beacons install ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - BGR
Samsung ၏ Galaxy Note ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် 10 + ပထမအမြင်! - ဗွီဒီယို
စာတိုက်စီမံကိန်းများငွေကြေး: အနောက်အာဖရိကပွညျထောငျစု၏ Post ကို၏ညီလာခံတစ်ခုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏စိတ်နှလုံးမှာပြဿနာ
သူတို့အဲဒီမှာ get သည်အထိပြည်သူ့မိမိအိမျမှာရယ် ... - ဗွီဒီယို
သူမ၏အထီးကျန်အကြောင်းကို Britney Spears ဆွေးနွေးပွဲနှင့် "ယုံကြည်စိတ်ချသူ" သိဘယ်တော့မှနောင်တ
အိန္ဒိယ: Chidambaram ဗီဂျေး Mallya, Nirav မိုဒီနဲ့တူပြုမူ: BJP | အိန္ဒိယသတင်း
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,148